မေး ။ တချို့ မိန်းကလေး တွေ ကစားနေချိန်မှာ ပိန်တယ်…မကစားတော့တဲ့ အခါမှာ ပေါ်ပိုင်းကြီး ကြီးလာတတ် တယ် ဆိုတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ….
ဖြေ ။ အဲဒါ က ကိုယ် တက်ချင် ကျချင်တဲ့ နေရာ ကို စိတ်ထည့်ပြီး ကစားတတ်ရပါတယ် ။ ကျချင်တာ က ကျောကုန်း မှာ ကျောကုန်း ကို စိတ်မထည့်ဘဲ ၊ လက်မောင်း အားကြီး နဲ့ ကစားနေရင် ၊ လက်မောင်းတွေ ကြီးလာမယ် ၊ ရင်အုပ်တွေ ကျယ်လာမယ် ၊ အပေါ်ပိုင်း တွေ ကြီးလာပါမယ် ။ အဲဒါ က လည်း ကစားနေတဲ့ အခါ မှာ လှုပ်ရှားမှု ရနေတဲ့ အတွက် ပိန်နေတာ ဖြစ်ပြီး ရပ်လိုက်လို့  ကိုယ့်မှာ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှု လုံးဝမရှိတော့တဲ့အခါကျရင် ကစားနေချိန်တုန်းက ကိုယ်မှားပြီး အားထည့်ကစားမိခဲ့တဲ့ နေရာတွေကိုတွန်းအား ပေးသလို ဖြစ်စေ တဲ့အတွက် အဲဒီ နေရာတွေ က ပိုကြီး လာတတ်တဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ် ။
မေး ။ လှပတဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် တစ်ခု ကို တစ်သက်တာ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ဘယ်လိုနေထိုင် စားသောက်ရပါမလဲ ….
ဖြေ ။ အဆီအဆိမ့် ၊ ဆီကြော်မုန့် ၊ အချိုရည် ၊ ရေခဲရေ ၊ အလွယ်တစ်ခုရသော Fast Food ခေါ် အစားအစာများ အလွန် အမင်း စား သောက်ခြင်း ကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပြီး မလိုအပ်ဘဲ အဆာပြေ ၊ အပျင်းပြေ ခဏခဏ စားတာ ကို ရှောင်ဖို့ လိုပါ တယ် ။ ထို့ပြင် မိမိတို့ တစ် နေ့တာ နေထိုင် စားသောက်သမျှ အစာ အာဟာရ နှင့် သင့်တော်သည့် ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှုမျိုး မိမိ တွင် အမြဲ ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ရန်လိုပြီး မိမိ ၏ ကိုယ် အလေးချိန် ကို စံနှုန်း တစ်ခု ထား၍ အမြဲထားပြီး တက်တာ နှင့် ချက်ချင်း အစားအသောက် ပြန် ဆင်ခြင် ၊ ကိုယ်လက်လှုပ် ရှား ကစားမှု တစ်ခုခု ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ပါတယ် ။
မေး ။ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီး မှာမှ ညစာ စားပြီး အိပ်ရာဝင်တဲ့ သူ ဟာ ပုံမှန်စားတတ်တဲ့ သူတွေ ထက် ပို ၀ တတ် တယ် ဆိုတာ ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ။
ဖြေ ။ ညအိပ်ရာ ၀င်ခါနီး ညစာစားပြီး လျှင် လှုပ်ရှားမှု လုံးဝ မရှိတော့ဘဲ ၊ TV ထိုင် ကြည့်ခြင်း ၊ လှဲလျောင်း အနားယူ အိပ်စက်ခြင်း သာ ရှိတော့၍ အဲဒီ သူတွေ ဟာ ပုံမှန် စားတဲ့ သူတွေ ထက် ပို ၀ လာတတ်တဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်ပါ တယ် ။
မေး ။ တချို့သော အမျိုးသမီးတွေ ငယ်ငယ်တုန်း က ဘယ်လောက် စားစား လုံးဝ ကို ၀လာမယ် မထင်ရတဲ့ သူ မျိုး ဖြစ် ပေမယ့်…အိမ်ထောင် ကျ ကလေး မွေးပြီးတဲ့ အချိန်မျိုး မှာ ထိန်းမရအောင် ၀တက် လာတာ ဘာဖြစ်လို့ ပါလဲ ။ အဲဒီလို မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက် ရမလဲ ။
ဖြေ ။ အမျိုးသမီးတွေ အများစု က အသက် ( ၂၅ ) နှစ်ကျော် လာတာ နဲ့ ပုံမှန်ထက် စ တင် ၀ လာတတ်တဲ့ သဘော မျိုးရှိပါတယ် ။ အဲ ဒီလို စ ၀ လာတာ နဲ့ သတိထားပြီး အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ခြင်း ၊ အိမ်ထောင်ကျတဲ့ အခါ မှာ လည်း တတ်သိနားလည်တဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေ နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး မ၀မယ့် ကိုယ်ဝန် တားနည်း တစ်ခုခု ရွေးချယ် အသုံးပြုခြင်း ၊ ကလေး ယူရင်လည်း မီးဖွားပြီး အချိန် အကန့်အသတ် တစ် ခု ရသည် နှင့် အနေ အထိုင် အစားအသောက် ဆင်ခြင်ပြီး နှစ်သက်ရာ ၀ိတ်ချနည်း တစ်မျိုးမျိုး ကို ရွေးခြယ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ထိန်းသိမ်း သွားနိုင်ပါတယ် ။
မေး ။ အရပ် ရှည်ချင် တဲ့ အမျိုးသမီးလေး တွေ အတွက် ဆို ဘယ်လောက် လေ့ကျင့် ကစားရမလဲ ။
ဖြေ ။ အရပ်ရှည်တာ က မိဘ မျိုးရိုး နဲ့ သက်ဆိုင် သလို နေထိုင် စားသောက်တဲ့ အစားအစာ ၊ အာဟာရ ၊ ဓလေ့ နဲ့ လည်း သက်ဆိုင်ပါ တယ် ။ အကြမ်းမျဉ်း ဆိုလျှင် အမျိုးသမီးလေးတွေ ဆို အသက် ၂၁ နှစ်ခန့် အထိ ရှည် နိုင်တယ် လို့ ဆိုကြပါတယ် ။ အနည်းဆုံးတော့ ၆ လ ခန့် ကစား မှ လက်မ ၀က် / ၁ လက်မ ခန့် လောက် သာ ရှည်ကြတာ များပါတယ် ။
မေး ။ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးတွေ အတွက် မ ၀ ရအောင် ဘယ်လို ကိုယ်ဝန် တား နည်း မျိုး က အကောင်း ဆုံးဖြစ် ပါသလဲ။
ဖြေ ။ အဲဒါ ကတော့ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် ခန္ဓာ ကိုယ် ဖွဲစည်းပုံ သဘောတရားခြင်း မတူညီကြ တဲ့ အတွက် နားလည် တတ်ကျွမ်း တဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေ နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး မိမိ ။ ခန္ဓာ ကိုယ် နှင့် သင့်တော်သည့် ကိုယ်ဝန် တား နည်း တစ်ခုခု ကို ရွေးခြယ် အသုံးပြုခြင်း က အ ကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ် ။
မေး ။ မီးယပ် လာချိန် မျိုး မှာ ကစားလို့ / အဆီချ လို့ ရပါသလား ။
ဖြေ ။ ။ အလွန် အမင်း ဆင်းတတ်တဲ့ သူမျိုး ဆိုရင် မီးယပ် လာချိန်မှာ အဆီချစက် တွေ နဲ့ အဆီချေ လိုက်ရင် / ကစားလိုက် ရင် ပိုပြီး ဆင်း လာတတ်တဲ့ တာ က လွဲရင် တခြား ပြသနာ ကြီးကြီး မားမား မရှိပါဘူး ။ ကိုက်ခဲ တတ် တဲ့သူ ဆိုရင်တောင် အဆီချစက်တွေ နဲ့ခါးတွေကို ဆွဲလိုက် ရင် (သို့) ကစားလိုက်ရင် နာကျင် ကိုက်ခဲ တာ ကို တောင် သက်သာ သွားစေပါတယ် ။
မေး ။ကစားခုန်စား ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ထွက်တဲ့ ချွေး က အသားအရည် ကို စိုပြည် လှပစေတယ် ဆိုတာ ဟုတ်ပါ သလား ။
ဖြေ ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား ကစားပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ခန္ဓာ ကိုယ် က ချွေးပုတ်တွေ ထွက်ပြီး သွေးလှည့်ပတ်မှု ကောင်းစေတဲ့ အတွက် အသား အရည် ကို စိုပြေ လှပစေပါတယ် ။
မေး ။ မီးဖွားထားလို့ အရမ်း ၀နေတဲ့သူ က အဆီချ လို့ လည်း မရသေးဘူး ဆိုရင် ဘယ်လို နည်းလမ်းတွေ နဲ့ ပိန်အောင် လုပ်ရပါမလဲ ။
ဖြေ ။ ။ အစားအသောက် ကို ချင့်ချိန် ၍ စားပြီး မပြင်းထန်သော ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှု များ ကို လေ့ကျင့်ကစား သွားရင်း ဖြင့် ပိုမိုခံနိုင်ရည် ရှိလာသည့် အခါ ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးတိုး ၍ လေ့ကျင့် ကစားသွားပြီး တဖြည်းဖြည်း ပိန်အောင် လုပ်နိုင် ပါတယ် ။
မေး ။ ကစားရင် ကိုယ်ကျချင် တက်ချင်တဲ့ နေရာကို စိတ်ထည့်ကစားရတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်…စိတ် မထည့် ဘဲလှုပ်ရှား နေရုံ နဲ့ ရော မကျနိုင်ဘူးလား ။
ဖြေ ။ စိတ် မထည့် ဘဲ လှုပ်ရှား နေရုံနဲ့ အထိုက်အလျောက် ကျသည်မှာ မှန်သော်လည်း ကျချင်သည့် နေရာ ကို စိတ်ထည့် ၍ ကစားချင်း က ပိုမို ထိရောက်စေပါတယ်။ ဥပမာ - ပက်လက်လှန် အိပ်ပြီး ခြေထောက် ကို ၉၀ံ စုံမြှောက်သည့် လေ့ကျင့်ခန်း ဆိုပါတော့ ။စိတ်မထည့် ဘဲ ခြေထောက် ကို စုံ လိုက် သတ်မှတ် အကြိမ် အရေ အတွက် ပြည့်အောင် ကစားသူနှင့် ဗိုက်နေရာ ဆို ဗိုက် သေသေချာချာ စိတ်ထည့် သွင်း ပြီး ကစားသည့် သူက ပိုပြီး အကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိစေပါတယ် ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော စိတ်ထည့် ကစားတတ်သူက သတ်မှတ် အကြိမ် အရေအတွက် ပြည့်ရုံမှ မက ၀မ်းဗိုက် ကြွက်သား များ ကို ပါ ပိုမို ထိရောက်စေပြီး ကျစ်လျစ် သန်မာ လာစေရန် ကစားနိုင် သော ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ် ။ ။
မေး ။ ပိန်တဲ့သူ တွေ ကိုယ် ခန္ဓာ အချိုးကျ လှပ အောင် ကစားရင် ပို ပိန်သွားနိုင်မလား ။
ပိန်တဲ့သူ ၏ ခန္ဓာ ကိုယ် အနေအထား ကို ကြည့်ပြီး နေ့တိုင်း ကစားရန် ၊ ရက်ခြား ကစားရန် စသဖြင့် လေ့ကျင့် ပေးရပါတယ် ။ အ ရမ်း ပိန်တဲ့သူ ကို နေ့တိုင်း ကစားခိုင်းလျှင် ပင်ပန်းပြီး ပိုပိန် သွားတတ်ပါသဖြင့် အာဟာရ ဖြစ်သော အစားအစာများ ကို စား၍ ရက်ခြား ကစားစေခြင်း ၊ အိပ်ရေး၀၀ အိပ်စေခြင်း ၊ စိတ်ဖိစီးမှု ရှောင် စေခြင်း ဖြင့် ပိုပိန် မသွားဘဲ ခန္ဓာ ကိုယ် အချိုးကျ လှပစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မေး ။ စစချင်း ကစားတဲ့အချိန် မှာ အကြောလျော့ ရင် ထိအောင် အရမ်း ပြင်းပြင်း မလုပ်ရဘူးလို့ ကြားဖူးတာ ဘာကြောင့် ဘာကြောင့် ပါလဲ ။
ဖြေ ။ ကစားသည့်သူက ထိအောင် မကစားနိုင် သေးသည် ကို သင်ပေးသည့် နည်းပြ များ က မထိသည် ကို ထိအောင် ဖိပေး လိုက်လျှင် လွယ်သလို ရှိပေမယ့် လာကစားသည့်သူ က ပုံမှန် ထက် ပိုမို နာကျင်သွားတတ် သည့် အတွက် သူ့အလိုလို ကစားသွားရင် တဖြည်းဖြည်း ချင်း ထိအောင် ကစား သွား နိုင်တာ က ပိုကောင်း တာကြောင့် ဖြစ် ပါတယ်။
မေး ။ ကစားတာ ကို ဗိုက်သားတွေ ကြွက်သားလို ကျစ်လစ် နေတဲ့ အထိ ကစားချင်တယ် ဆိုရင် ဘယ်လောက် ကစား ရပါ မလဲ ။
ဖြေ ။ နှစ်ကာလ အတန်ကြာ သည် အထိ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကစား သွားမှ ရပါမယ် ။
မေး ။ ပုံမှန်ကစားတာ နဲ့ အဆီကျ ဆေးလိမ်းပြီး အဆီချတာ ဘယ်ဟာက ပိုသင့်တော်တယ် ထင်ပါသလဲ…..။
ဖြေ ။ အလျှင် အမြန် ပိန်ချင်တဲ့သူမျိုး ( ဥပမာ - မင်္ဂလာဆောင် ၊ ဘွဲ့၊ နိုင်ငံခြားသွားရန် စသဖြင့် …. အရေး တကြီး နှင့် အလျှင် အမြန် ပိန် ချင်တဲ့သူဆိုလျှင် အဆီကျ ဆေးလိမ်းပြီး စက်နဲ့ အဆီချတာက ပိုပြီးသင့်တော်ပြီး ဖြေးဖြေး နဲ့ မှန်မှန်ပဲ ပိန်ချင်တယ်၊ ကျန်းမာရေး ကောင်း ကောင်းမယ် ၊ Stress လည်းလျှော့ချင်တယ်၊ လှုပ်ရှားမှု လည်း ရှိချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ပုံမှန်ကစား သွားတာ ကောင်းပါတယ် ။